ဂျပန်လူမျိုးအတွက် Mask တွေအခမဲ့ပေးနေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတစ်စု!!! - JAPO Japanese News
သော 06 Mar 2020, 10:17 မနက်
တရုတ်နိုင်ငံကနေအစပြုခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရဲ့ သက်ရောက်မှုကြောင့် လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံမှာပါ Mask မလုံလောက်တဲ့ ပြဿနာတွေရှိလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တိုကျိုမြို့နဲ့ အိုဆာကာ အစရှိတဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာ လူအပြည့်ပါလာတဲ့ရထားကို မစီးလို့ကလည်းမဖြစ်တဲ့အတွက် Mask ဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ ပစ္စည်းလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ပြဿနာကတော့ Mask ကိုရှာဝယ်လို့ မရဖြစ်နေတာပါ။
အဲ့ဒီလိုအထဲမှာမှ Mask ကိုအခမဲ့ပေးနေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတစ်စုကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
board အပြားပေါ်မှာ ဂျပန်စာကိုတောင် လက်ရေးနဲ့ရေးထားပါသေးတယ်။
” Mask တွေအခမဲ့ ဝေပေးနေပါတယ်!
အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေကို ဦးစားပေးပါတယ်။
အက်ပလီကေးရှင်းကနေဝယ်ထားတဲ့ Mask တွေပါ။
လူကြီးတွေအတွက် အခု ၆၀၀ ၊ ကလေးတွေအတွက် အခု ၅၀။
Mask မရှိသေးတဲ့လူတွေ သေချာပေါက် ဒီမှာလာယူပါနော်!!!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဂျပန်လူမျိုးများ!!! ”
ဒီလိုအချိန်မှာ တရုတ်လူမျိုးတွေက ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Mask လိုက်ဝယ်ကြပြီး၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေဆီကိုတောင် မသွားရဲ ကြတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။
အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေတော့လည်း ဒီလိုမှမလုပ်ရင် မရတော့ပါဘူးနော်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေကလည်း Mask တွေဝယ်လို့မရတော့လို့ ထိတ်လန့်နေကြပါပြီ။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတစ်စုက “တရုတ်လူမျိုးတွေက အနှောက်အယှက်ပေးမိလို့ အကြွေးပြန်ဆပ်ပါမယ်” ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အစပြုခဲ့တာကတော့ အခုပြောပြနေတဲ့ Mask တွေအခမဲ့ဝေပေးတဲ့ အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ချက်ချင်း ဂျပန်အစိုးရကနေတရုတ်နိုင်ငံအတွက် ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ပေးခဲ့တာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်နေပုံရပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာလည်း ဒီလိုဗိုင်းရပ်စ်ကိုပြန်တိုက်ခိုက်နေရတာ ပင်ပန်းနေကြပါပြီ။
အရိုးသားဆုံးပြောရရင် ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဆိုတာ ၂ နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးသိပ်မကောင်းပါဘူး။
လက်ရှိအချိန်အထိ “ဆိုးဝါးသောဖက်စစ်ဂျပန်” ဆိုပြီး ပညာရေးမှာသင်ကြားပို့ချနေသူ အမြောက်အများလည်းရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ဒီလိုလူတစ်စုရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးဟာ အစိုးရသဘောနဲ့မသက်ဆိုင်ဘဲ သီးသန့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးလေးနဲ့ လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလှုပ်ရှားမှုလေးကနေ ၂ နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးဟာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း ဝမ်းသာမိမှာပါ။
ဒါကိုလည်း အချို့က တရုတ်အစိုးအရက သက်သက်နိုင်ငံရေးအရလုပ်နေတာလို့ ထင်ကြတဲ့လူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ အခုအချိန်ကတော့ အတူတူလက်တွဲပြီး ကိုရိုနာကိုမတိုက်ထုတ်ရင်မရတဲ့ အခြေအနေပါပဲ။
ဒါကိုမြင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တောင် သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးမှာ ပြန်ပြီးကျေးဇူးလည်းတင်သလို၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပပျောက်ရေးအတွက် အတူတူပူးပေါင်းလက်တွဲလုပ်ဆောင်ချင်စိတ်တွေ ပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်!!!
Hibiscus Essence Spamist
နိုင်ငံခြားအထိနာမည်ကြီးတဲ့ နံပါတ် (၁) KOBE BEEF !! သို့သော် Kobe နွားဆိုတဲ့အမျိုးအစားတော့မရှိဘူးတဲ့ ?
ဆောင်းရာသီအလှကို ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ Gifu စီရင်စုရှိ Shirakawa ရွာကလေး.
ပြဿနာတွေဖန်တီးတဲ့ကလေး? ဒါပေမယ့်လည်း အချစ်ခံရတဲ့ 江戸っ子 Edokko !